dual ဒီဂရီ Programs ကို | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -toeictw.com
dual ဒီဂရီ Programs ကို
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan dual ဒီဂရီ Programs ကို ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပြည်ပမှာလေ့လာနေများစွာသောလူများ၏အိပ်မက်ဖြစ်ပါသည်,ဒါပေမဲ့ပြည်ပမှာလေ့လာဖို့ပိုက်ဆံ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုသူတို့ထဲကအများစုဟာအောင်မြင်မရနိုငျအဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်.မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း,ထိုင်ဝမ်အများအပြားတက္ကသိုလ်များတစ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါပြီ"dual--ဒီဂရီပရိုဂရမ်တစ်ခု"အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များနှင့်အတူ,သူတို့လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောကျောင်းများတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုသွန်သင်ကြပြီ.ဤရွေ့ကားတက္ကသိုလ်များအချင်းချင်းသူတို့ရဲ့ခရက်ဒစ်လွှဲပြောင်းလိမ့်မယ်.ကျောင်းသားများကသူတို့ထိုင်ဝမ်၌ပထမဦးဆုံး3နှစ်စာလေ့လာလို့ရပါတယ်’s ကိုတက္ကသိုလ်.အဆိုပါ TOEFL entry ကိုတံခါးခုံကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက်,ကျောင်းသားများ4လေ့လာလို့ရပါတယ်ကြိမ်မြောက်ဦးအတွက်တစ်နှစ်လျှင်.S က.အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးကိုတွေ့ဆုံအပေါ်သို့’s ကိုလိုအပ်ချက်များကို,သူတို့လေးနှစ်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးတက္ကသိုလ်များအနေဖြင့်ဒီပလိုမာရနိုင်.ထို့အပြင်,ကျောင်းသားများကိုအလွယ်တကူသင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုအောင်မြင်ရန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.